SOO QAADO CDBURNERXP BILAASH LACAG LA'AAN AH RUUSHKA - DIB U EEGISTA BARNAAMIJKA - 2020
Ugu Weyn Ee Dib u eegista Barnaamijka
Markaad la shaqeyneyso sawirada oo gubi CD / DVD, waxaa muhiim ah in aad daryeesho qalab tayo leh oo si buuxda ula qabsan doona dhammaan hawlaha. CDBurnerXP waa barnaamij sahlan, oo awood leh oo kuu ogolaanaya inaad la shaqeysid sawirada isla markaana aad ku qorto macluumaadka darawalnimada.
CDBurnerXP waa qalab loo yaqaan dad badan. Dhab ahaantii, waxay bixisaa dhamaan noocyada kala duwan ee fursadaha lagu gubi karo laydhka iyo la shaqaynta sawirrada, laakiin waxaa loo qaybiyaa si dhammaystiran oo bilaash ah.
Dulucda: Sida loo gubiyo feylka CDBurnerXP
Waxaan kugula talineynaa inaad aragto: Barnaamijyo kale oo loogu talagalay dhagxaanta gubashada
Gubashada faylka xogta
Daaqad sahlan ee barnaamijka ayaa hubin doonta shaqo raaxo leh oo leh diiwaangelinta xogta. Halkan waxaad ku qori kartaa faylasha wixii faylasha loo baahnaa ee ku jira kombiyuutarkaaga. Qaybtani waxay kaloo soo saartaa sawirada ISO.
Diyaarso fiidiyaha DVD
Kaliya dhowr fiidiyow oo aad ku gubi karto DVD-filin si aad ugu ciyaarto qalab kasta oo taageera.
Diiwaangelinta Cd Audio
Iyada oo laga caawinayo qalab CDBurnerXP gaar ah, waxaad ku habboonaan kartaa inaad ku duubto duubista codka adoo dejinaya xuduudaha sida dejinta meelaha u dhaxeeya wadooyinka, helitaanka lyrics, iwm.
Gubta sawirada ISO si aad u hesho darawal fudud
U sheeg inaad leedahay sawir ISO ah oo ku saabsan kombiyuutarkaaga oo aad rabto inaad ku ordo. Dabcan, waxaa lagu wadi karaa iyadoo la isticmaalayo qalab wicitaan ah, oo la abuuri karo, tusaale ahaan, barnaamijka UltraISO. Laakiin haddii aad u baahatid inaad sawir u qorto sawirka, ka dibna kiiskan CDBurnerXP waa doorashada ugu fiican.
Haddii aad leedahay laba drives, markaa waxaad haysataa ikhtiyaarka inaad ku daabacdo faallooyinka. Markaa, waxaad samayn kartaa nuqul dhamaystiran adigoo u wareejinaya dhammaan macluumaadka hal ilays (ilo) illaa qof kale (alaab-qaada).
Haddii aad rabto inaad tirtirto macluumaadka laga duubay CD-RW ama DVD-RW-gaaga, qeyb ka mid ah barnaamijka ayaa la bixiyaa kiiskan. Halkan waxaad ku heli doontaa ikhtiyaari laba nooc oo kala-soocid ah: hal kiis, tirtiriddu si dhakhso ah ayay u socotaa, iyo dhinaca kale, ka-saariddu waxay noqon doontaa mid aad u ballaaran, yaraynta khatarta ka soo kabashada xogta.
1. Xirfad fudud oo dhexdhexaad ah oo taageero leh luuqada Ruushka;
2. Dhamaan waajibaadka lagama maarmaanka u ah qorista macluumaadka disk;
3. Gabi ahaanba dhexdhexaad ah.
1. Lama garanayo.
Waxaan kugula talineynaa inaad aragto: Barnaamijyo kale si loo abuuro sawirka sawir
Haddii aad u baahan tahay sahlan, laakiin isla mar ahaantaana marin wax ku ool ah oo loogu talagalay diiwaan gelinta CD ama DVD, hubso inaad u fiirsato CDBurnerXP - mid ka mid ah xalalka ugu fiican oo dhameystiran.
Soo iibso CDBurnerXP lacag la'aan
Ka soo dejiso barnaamijka ugu dambeeya ee barnaamijka ka socda goobta rasmiga ah
Writer CD Sida loo qoro feylka Sida loo abuuro sawirka ISO ee Windows 7 Sida loo gubiyo / nuqulo / laydin karo disk ah CDBurnerXP
Maqaalka maqaalkan ee shabakadaha bulshada:
CDBurnerXP waa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay diiwaan gelinta iyo koobiyeynta CD, DVD, Blu-ray, HD-DVD-ga. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro images ISO kadibna u qori wadada.
Nidaamka: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista
Qeybta: Dib u eegida Barnaamijka
https://termotools.com so.termotools.com © Dib u eegista Barnaamijka 2020